Indlela Yokwenza I-Humane Fruit Homemade Fly Trap Trap
Imiba Ulawulo lwezilwanyana
by UDoris Lin
Qala ngeqhekeza iphepha
Yibani iimbombo zombini zephepha kumnye nomnye. UDoris Lin
Ukwenza umntu onobuqhetseba, udibanisa umsila, uza kuyimfuneko:
Jar okanye indebe enevalo elincinci
Isiqhamo seziqhamo somlenze
Qala ngokuqhoboza isiqwenga samaphepha kwi-cones. Ukwenza i-cone, qala ukudonsa amabini emacaleni kwiphepha ukuya kwelinye icala, ecaleni kwiphepha elide.
I-Curl iPhepha ibe yiCone
Ukukhahlela iPhepha ibe yiCone. UDoris Lin
Ukusebenzisa ngezandla zombini, Qhubeka nokuzisa iikona zekhasi ndawonye, ​​kwaye uzindibanise, ulungele iphepha elikulo lombonakalo.
Ukugqiba iphepha lePhepha
Ukuvula kwinqonga le-cones kufuneka kube mncinci kakhulu - kungekho mkhulu kuneziqhamo ezindizayo. UDoris Lin
Funda ngemiyalelo kanye kwaye ujonge iifoto ngaphambi kokuba wenze lo mgibe, ukuze ubone indlela enkulu ikona efuna ukuba ngayo, ngokubhekiselele kwi-jar okanye indebe.
I-Curl iphepheni kwi-cone epholileyo, enevulo kwisicatshulwa malunga ne-2-3 mm (ngaphantsi kwe-one-eighth inch). Ufuna i-cone ephakamileyo, ngoko-ke ungayigxina kwakhona. Khuselekile nge-tepi kufuphi nale nqaku. Ukuba ukhohliwe ukushiya umvalo kwintonga yeconsi yakho, ungazikhupha isicatshulwa, kodwa kungcono ukususa itheyipu kwaye utshintshe i-cone, ukuba kube lula ukukhupha kakhulu. Cima umda wokubanzi weqhekeza, ukuze i-cone ibe malunga nee-intshi ezingama-4 ukuya kwe-10 ukuya kwe-15.
Isibambiso - isiqhezu esincinci sebhanana - sisetyenziswe. UDoris Lin
Beka bucala iphepha lephepha. Ngoku, faka isiqhamo esincinci (ndifumene ukuba iibhanana kunye neeperekisi zisebenza kakuhle) phantsi kwebhodi okanye indebe. Ndisebenzise isiqwenga sebhanana kunye nejelo lokutya kwabantwana kule sithombe.
Namathisela iCape Cone kwiJar
Umgibe wakho uphelile! UDoris Lin
Hlela ikhonkco lephepha kumphezulu webhotile. Umphezulu wephepha lephepha lephepha kufuneka iphakame ngokukhawuleza phezulu phezulu kwendiza, kunye nenqaku lekhono kufuneka liye phambi kokuba lifike kwisiqhamo okanye ngaphantsi kwebhotile. Khusela ikona kwisitya kunye neengxenye ezimbini zeetape. Ufuna ukuqinisekisa ukuba itheyiphi ibamba i-cone snugly kwi-jar, ngaphandle kokubeka ingcinezelo eninzi kwiqonkqo.
Umgibe wakho uyenziwe! Ngaphambi kokuba uyibeke ngaphandle, qiniseka ukuba akukho ziqhamo ezinqabileyo ezinqabileyo kwiindawo. Thatha udoti, vala ibhakethi yakho yesikompo, uhlambe izitya uze ufihle ibhasikidi yakho yeziqhamo kwifriji okanye kwindawo apho iziqhamo zintlanzi aziyi kuvumba iziqhamo zakho. Beka umgibe kwi-countertop, ecaleni kwinqwelo yokulahla, okanye naphi na apho ubonile izilwanyana. Ngemizuzu embalwa, mhlawumbi uya kuba ne-fly okanye ukuhla kwembini ngaphezulu kwephepha lephepha. Hamba, ukhangele umgibe ngeeyure ezimbalwa.
Ukukhupha iiFlies Fruit
Emva kweeyure ezimbalwa, kukho iimpukane ezininzi kumgibe. UDoris Lin
Izimpukane zeziqhamo ziya kulandela isiphumo sesiqhamo ukuya kwindawo ephantsi kweqonkqo, kodwa kamva ngaphakathi, abanakufumana indlela yabo yokubuya. Emva kweeyure ezimbalwa, mhlawumbi uya kufumana izilwanyana ezifubeni kumgibe wakho. Le yilapho inxalenye yomsindo ifika khona: Thatha umsila wakho ngaphandle, susa itheyipu uze ususe ipowuni yephepha ukukhulula iziqhamo .
Ungavumeli ukuba umgibe wakho ungakhange uhlolwe ixesha elide ngaphezu kobusuku. Awufuni ukubenza bagxinwe ixesha elide, kwaye ukuba bahlala apho ngaphezu kwemihla, amaqanda aya kuqala ukukhangela.
Kungenzeka ukuba awuzange ubambe zonke iimpukane kwiiyure ezimbalwa zokuqala, ngoko kuya kufuneka ubeke umgibe. Ukuphinda ubeke umgibe, susa umlenze, wuthathe indawo kunye nesiqhamo esitsha sesithelo, uze uthayiphe ikona yephepha endaweni. Ukuba uqhubeka usebenzisa isiqhelo esifanayo, amaqanda kuwo aya kutshaba kwaye uya kugqiba iintlobo zeentlanzi zeziqhamo ngaphakathi kwesiqu sakho.
Ukuba izimpukane azikhange kwisicupho sakho, qi ni sekise ukuba akukho zitsalane (ukutya, udoti, izitya ezingcolileyo, njl.) Kwindawo. Unokuzama ukusebenzisa uhlobo oluthile lweziqhamo njenge-bait.
Ukuba iziqhamo zintlanzi zihamba ngokukhawuleza kwaye ziphuma emthonjeni wakho, umgodi ophantsi kwidonki ingaba mkhulu kakhulu. Ukukhulula nayiphi na iimpukane ezisesigxeni sakho, uze wenze ikona yephepha kunye nomngxube omncinci kwinqonga. Ufuna ukuba umgodi ungabi mkhulu kunesiqhamo senyuka. Enye ingxaki mhlawumbi kukuba ikhonksi lephepha lixubene kwaye alihambelani ngokukhawuleza ekuvulekeni kwebhotile, yonke indlela. Yenza i-cone entsha, kwaye uqaphele ukuba ungabonakali iphepha.
UDoris Lin, uEsq. ngummeli wamalungelo esilwanyana kunye noMlawuli wezeMicimbi yezoLimo kwiLungelo loKhuselo lwezilwanyana zaseJan.
Zingaphi Abantu Ababulawayo okanye Abalimala Kwiingozi Zokuzingela?
Yiyiphi Impumelelo Yokuzingela Eyona Ngohlobo Lwakho Lokuzingela?
Ukuzisa iiN Integers kunye neNombolo yokuHlalisana kwabaFundi abakhubazekileyo
Ukuhamba kwamandla kwiiNcosystems
Lithini IBhayibhile Ngokuzibulala?